Instagram CEO ဟောင်း Kevin Systrom ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဘဝအကြောင်းတွေ
7 Oct 2018 . 12:22 PM
Instagram ဆိုတာကို ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ Founder Kevin Systrom ဆိုသူကိုတော့ လူတော်တော်များများ သိကြမယ့် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Instagram ဆိုတာကိုတော့ အခုအချိန်မှာ Facebook သုံးသူတော်တော်များများ သုံးလာပြီဖြစ်လို့ လူသိများလာပါတယ်။ Facebook အနေနဲ့ Instagram ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သိန်းတစ်ထောင်နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Facebook ရဲ့တွက်ဖက် ဝန်ဆောင်မှု Photo Platform တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီးရှိနေပါတယ်။
Instagram ရဲ့ CEO Kevin Systrom နဲ့ CTO တို့က ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာပဲ Instagram ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုအဖြစ်အပျက်ကတော့ Facebook CEO Mark Zuckerberg နဲ့ Instagram Founder တွေကြားမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်စရာတွေကြောင့် အစချီခဲ့တာပါ။
Instagram on iPhone X
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ Systrom နဲ့ Krieger တို့က သူတို့ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ App တစ်ခုကို ဒီတိုင်း ပစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။
Instagram ဆိုတာက Systrom ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရူးသွပ်မှုကနေ အစချီပြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ အအောင်မြင်ဆုံး Social Media App စာရင်းထဲမှာရှိနေပါပြီ။ Instagram မှာ အသုံးပြုသူပေါင်း သိန်းတစ်ထောင် ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီနှစ်အစောပိုင်းက စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်။
အခုလို အောင်မြင်တဲ့ Instagram ဖြစ်မလာခင်မှာ Systrom ဘာတွေလုပ်နေခဲ့တာလဲ?
Kevin Systrom ကိုတော့ American နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်၊ Holliston မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ HR Executive အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး မိခင်ကတော့ Monster ၊ Swapit နဲ့ Zipcar ကုမ္ပဏီတွေမှာ Tech အပိုင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာတော့ Systrom က သီချင်းခွေတွေစုတာနဲ့ DJ အပိုင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာလည်း သူ့ကို Boston တစ်ဝိုက်က အတွေ့အကြုံရှိ DJ သမားတွေရှိတဲ့ Club တွေကို ခိုင်းဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ့် သူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Systrom က Stanford တက္ကသိုလ်ကို တက်ဖို့ မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ပထမကတော့ သူက Computer Science တက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Stanford ကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် သူရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Management Science And Engineering Major ဖက်ကို ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ထပ်ချခဲ့တာပါ။
Instagram စဖြစ်လာဖို့ အချိန်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Systrom က ဓာတ်ပုံတွေကို စပြီးစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်ဝင်စားမှုကပဲ သူ့ကို ဓာတ်ပုံတွေ Share ဖို့ Website တစ်ခုကို ဖန်တီးစေခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ Website ကိုတော့ သူနဲ့ ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေအတွက် သူ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ကျောင်းပထမနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နှစ်ဝက်အတန်းတစ်ခုကို Italy နိုင်ငံက Florence မြို့မှာ သွားတက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Instagram ဆိုတာဖြစ်လာဖို့အကြောင်းကတော့ Systrom Florence ကိုရောက်နေချိန်ကနေ စတာပါ။ သူ့ကို ဓာတ်ပုံပညာအကြောင်းသင်ပေးတဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်က Holga လို့ခေါ်တဲ့ ဈေးပေါပေါ Flim Camera တစ်လုံးကို ပြလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း အဲ့ဒီ Camera ကထွက်လာတဲ့ပုံတွေက ခေတ်ဟောင်းဆန်နေပြီး ကြည့်ကောင်းနေတာကို Systrom သဘောကျသွားပါတယ်။
Jack Dorsey (ဘယ်ဖက်) နဲ့ Evan Williams (Twitter Founder)
Stanford မှာ Senior နှစ်မစခင်မှာပဲ Systrom က Podcast ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Odeo မှာ အလုပ်သင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Odeo ကုမ္ပဏီကိုတော့ Twitter Founder ဖြစ်လာမယ့် Evan Williams ဆိုသူက တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ Twitter ရဲ့ CEO ဖြစ်လာမယ့် Jack Dorsey ကလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Odeo မှာ အလုပ်လုပ်နေခဲ့ရင်း Systrom နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Systrom ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း Google က အလုပ်ကမ်းလှမ်းလာတာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Google မှာ သုံးနှစ်ကြာအောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Nextstop ဆိုတဲ့ Startup ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Nextstop ကိုလည်း Facebook က ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Systrom testing the App
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Systrom က Burbn လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် App တစ်ခုအပေါ် အာရုံစိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ Burbn ကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ Share နိုင်မယ့် Social Network တစ်ခုပါ။ Steve Anderson ဆိုတဲ့ Baseline Ventures က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Burbn အပေါ် ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ Marc Andreessen နဲ့ Ben Horowitz တို့နှစ်ဦးကလည်း နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲထပ်ထည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Marc Andreessen (ဘယ်ဖက်) နဲ့ Ben Horowitz
အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်သွားခဲ့သလို Burbn ကနေ Instagram ဖြစ်လာဖို့ ပိုနီးလာခဲ့ပါတယ်။ Burbn ပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေက သိပ်ကြည့်မကောင်းဘူးဆိုပြီး Filter တွေထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြံကို ရည်းစားဖြစ်သူ (ယခု ဇနီး) Nicole က ပေးခဲ့တာပါ။ ပထမဦးဆုံးထည့်ပေးခဲ့တဲ့ Filter ကတော့ X-Pro II လို့နာမည်ပေးထာတဲ့ Fileter ဖြစ်ပြီး အခုအချိန်အထိ App မှာ ပါနေပါသေးတယ်။
Systrom နဲ့ Mark Zuckerberg
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ မှာတော့ Systrom နဲ့ Krieger တို့က App ကို Instagram ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ Instagram ဆိုတာကတော့ Instant ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Telegram ဆိုတာကို ပေါင်းထားပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ Instagram ဆိုပြီး App ထွက်လာတဲ့အခါလည်း ၂၄ နာရီအတွင်း Download လုပ်သူပေါင်း ၂ သောင်းခွဲကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတဟုန်ထိုးအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ ၂၀၁၂ အေပရယ်မှာ Mark Zuckerberg က Instagram ကို ဒေါ်လာသိန်း တစ်ထောင်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Systrom အနေနဲ့ Instagram ကို 40% အထိ ပိုင်ဆိုင်နေတုန်းပါ။
Ref: Forbes | Business Insider | Fortune | Wikipedia | Reuters
Instagram CEO ဟောငျး Kevin Systrom ရဲ့ နောကျကှယျက ဘဝအကွောငျးတှေ
Instagram ဆိုတာကို ဖွဈလာစခေဲ့တဲ့ Founder Kevin Systrom ဆိုသူကိုတော့ လူတျောတျောမြားမြား သိကွမယျ့ မထငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Instagram ဆိုတာကိုတော့ အခုအခြိနျမှာ Facebook သုံးသူတျောတျောမြားမြား သုံးလာပွီဖွဈလို့ လူသိမြားလာပါတယျ။ Facebook အနနေဲ့ Instagram ကို အမရေိကနျဒျေါလာ သိနျးတဈထောငျနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈက ဝယျယူခဲ့ပွီး Facebook ရဲ့တှကျဖကျ ဝနျဆောငျမှု Photo Platform တဈခုအဖွဈ ဆကျပွီးရှိနပေါတယျ။
Instagram ရဲ့ CEO Kevin Systrom နဲ့ CTO တို့က ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာပဲ Instagram ရဲ့ သကျဆိုငျရာ ရာထူးကနေ နှုတျထှကျတယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အခုလိုအဖွဈအပကျြကတော့ Facebook CEO Mark Zuckerberg နဲ့ Instagram Founder တှကွေားမှာ မကမြေနပျဖွဈစရာတှကွေောငျ့ အစခြီခဲ့တာပါ။
စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကတော့ Systrom နဲ့ Krieger တို့က သူတို့ကိုယျတိုငျ အသေးစိတျဖနျတီးခဲ့တဲ့ App တဈခုကို ဒီတိုငျး ပဈထားခဲ့မယျဆိုတဲ့အခကျြပါ။
Instagram ဆိုတာက Systrom ရဲ့ ဓာတျပုံတှအေပျေါ ခဈြမွတျနိုးတဲ့ရူးသှပျမှုကနေ အစခြီပွီးဖွဈလာခဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာတော့ အအောငျမွငျဆုံး Social Media App စာရငျးထဲမှာရှိနပေါပွီ။ Instagram မှာ အသုံးပွုသူပေါငျး သိနျးတဈထောငျ ရှိတယျဆိုတာကိုလညျး ဒီနှဈအစောပိုငျးက စဈတမျးအရသိရပါတယျ။
အခုလို အောငျမွငျတဲ့ Instagram ဖွဈမလာခငျမှာ Systrom ဘာတှလေုပျနခေဲ့တာလဲ?
Kevin Systrom ကိုတော့ American နိုငျငံ အရှမွေ့ောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ Massachusetts ပွညျနယျ၊ Holliston မွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ ။ သူ့ရဲ့ ဖခငျဖွဈသူကတော့ HR Executive အဖွဈ အလုပျလုပျခဲ့ပွီး မိခငျကတော့ Monster ၊ Swapit နဲ့ Zipcar ကုမ်ပဏီတှမှော Tech အပိုငျးအတှကျ အလုပျလုပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျဘဝမှာတော့ Systrom က သီခငျြးခှတှေစေုတာနဲ့ DJ အပိုငျးကိုပဲ စိတျဝငျစားနခေဲ့ပါတယျ။ အထကျတနျးကြောငျးသားအရှယျမှာလညျး သူ့ကို Boston တဈဝိုကျက အတှအေ့ကွုံရှိ DJ သမားတှရှေိတဲ့ Club တှကေို ခိုငျးဝငျနိုငျအောငျလုပျပေးမယျ့ သူငယျခငျြးတှရှေိခဲ့ပါသေးတယျ။
ပညာရေးနဲ့ပတျသကျလို့တော့ Systrom က Stanford တက်ကသိုလျကို တကျဖို့ မွနျမွနျဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။ ပထမကတော့ သူက Computer Science တကျဖို့ရညျရှယျပွီး Stanford ကိုသှားခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ သူရောကျသှားပွီးတဲ့အခြိနျမှာတော့ Management Science And Engineering Major ဖကျကို ပွောငျးဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြထပျခခြဲ့တာပါ။
Instagram စဖွဈလာဖို့ အခြိနျ
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Systrom က ဓာတျပုံတှကေို စပွီးစိတျဝငျစားလာပါတယျ။ အဲ့ဒီလို စိတျဝငျစားမှုကပဲ သူ့ကို ဓာတျပုံတှေ Share ဖို့ Website တဈခုကို ဖနျတီးစခေဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ Website ကိုတော့ သူနဲ့ ဝါသနာတူသူငယျခငျြးတှအေတှကျ သူ့အားလပျခြိနျတှမှော ဖနျတီးခဲ့တာပါ။ ကြောငျးပထမနှဈအတှငျးမှာပဲ ဓာတျပုံနဲ့ပတျသကျတဲ့ နှဈဝကျအတနျးတဈခုကို Italy နိုငျငံက Florence မွို့မှာ သှားတကျခဲ့ပါသေးတယျ။
Instagram ဆိုတာဖွဈလာဖို့အကွောငျးကတော့ Systrom Florence ကိုရောကျနခြေိနျကနေ စတာပါ။ သူ့ကို ဓာတျပုံပညာအကွောငျးသငျပေးတဲ့ ပါမောက်ခတဈယောကျက Holga လို့ချေါတဲ့ ဈေးပေါပေါ Flim Camera တဈလုံးကို ပွလိုကျပွီးနောကျပိုငျး အဲ့ဒီ Camera ကထှကျလာတဲ့ပုံတှကေ ခတျေဟောငျးဆနျနပွေီး ကွညျ့ကောငျးနတောကို Systrom သဘောကသြှားပါတယျ။
Jack Dorsey (ဘယျဖကျ) နဲ့ Evan Williams (Twitter Founder)
Stanford မှာ Senior နှဈမစခငျမှာပဲ Systrom က Podcast ကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Odeo မှာ အလုပျသငျအဖွဈ ဝငျရောကျခဲ့ပါသေးတယျ။ Odeo ကုမ်ပဏီကိုတော့ Twitter Founder ဖွဈလာမယျ့ Evan Williams ဆိုသူက တညျထောငျခဲ့တာပါ။ Twitter ရဲ့ CEO ဖွဈလာမယျ့ Jack Dorsey ကလညျး တဈခြိနျတညျးမှာပဲ Odeo မှာ အလုပျလုပျနခေဲ့ရငျး Systrom နဲ့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈခဲ့ကွပါတယျ။ Systrom ဘှဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး Google က အလုပျကမျးလှမျးလာတာကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Google မှာ သုံးနှဈကွာအောငျ အလုပျလုပျခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး Nextstop ဆိုတဲ့ Startup ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။ Nextstop ကိုလညျး Facebook က ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ Systrom က Burbn လို့နာမညျပေးထားတဲ့ ကိုယျပိုငျ App တဈခုအပျေါ အာရုံစိုကျနခေဲ့ပါတယျ။ Burbn ကတော့ ဓာတျပုံတှေ Share နိုငျမယျ့ Social Network တဈခုပါ။ Steve Anderson ဆိုတဲ့ Baseline Ventures က ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတဈဦးဖွဈပွီး Burbn အပျေါ ဒျေါလာ ၂ သိနျးခှဲအထိ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။ Marc Andreessen နဲ့ Ben Horowitz တို့နှဈဦးကလညျး နောကျထပျ ဒျေါလာ ၂ သိနျးခှဲထပျထညျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။
Marc Andreessen (ဘယျဖကျ) နဲ့ Ben Horowitz
အဖွဈအပကျြတှကေ မွနျသှားခဲ့သလို Burbn ကနေ Instagram ဖွဈလာဖို့ ပိုနီးလာခဲ့ပါတယျ။ Burbn ပျေါက ဓာတျပုံတှကေ သိပျကွညျ့မကောငျးဘူးဆိုပွီး Filter တှထေညျ့လိုကျရငျရတယျဆိုတဲ့အကွံကို ရညျးစားဖွဈသူ (ယခု ဇနီး) Nicole က ပေးခဲ့တာပါ။ ပထမဦးဆုံးထညျ့ပေးခဲ့တဲ့ Filter ကတော့ X-Pro II လို့နာမညျပေးထာတဲ့ Fileter ဖွဈပွီး အခုအခြိနျအထိ App မှာ ပါနပေါသေးတယျ။
Systrom နဲ့ Mark Zuckerberg
အောကျတိုဘာ ၂၀၁၀ မှာတော့ Systrom နဲ့ Krieger တို့က App ကို Instagram ဆိုပွီး နာမညျပွောငျးပေးခဲ့တာပါ။ Instagram ဆိုတာကတော့ Instant ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Telegram ဆိုတာကို ပေါငျးထားပွီး ဖွဈလာတာပါ။ Instagram ဆိုပွီး App ထှကျလာတဲ့အခါလညျး ၂၄ နာရီအတှငျး Download လုပျသူပေါငျး ၂ သောငျးခှဲကြျောခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုတဟုနျထိုးအောငျမွငျလာတာနဲ့အမြှ ၂၀၁၂ အပေရယျမှာ Mark Zuckerberg က Instagram ကို ဒျေါလာသိနျး တဈထောငျနဲ့ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Systrom အနနေဲ့ Instagram ကို 40% အထိ ပိုငျဆိုငျနတေုနျးပါ။